I-Gold City Penthouse 3+1 ifake i-Aquapark YAMAHHALA - I-Airbnb
I-Gold City Penthouse 3+1 ifake i-Aquapark YAMAHHALA
I-Gold City Tourism Complex. 3 Igumbi lokulala 3 Indlu yokugezela i-Dublex Penthouse esakhiweni esiyinhloko enezindawo zamahhala ze-5 Star Hotel zihlanganisiwe. Indawo enhle, ama-aportunities ahamba phambili. Ibhishi elinesihlabathi ngokuphelele, i-aquapark YAMAHHALA, i-disco yamahhala, izindawo zokudlela, ama-bar, izindawo zokubhukuda ezivaliwe nezivulekile, umoya ohlanzekile, izindawo zokutshuza emanzini, i-sauna, inkundla yebhola, i-basketball kanye nebhola lomphebezo, i-spa, isikhungo sokuzivocavoca, amasevisi okuthutha mahhala, i-supmarket, isikhungo sokuthenga nokunye ... Sizojabula ukukubungaza esakhiweni sethu sezinkanyezi ezingu-5.
Ezokuqasha e-Gold City, izivakashi zethu zizokwazi ukusebenzisa i-Aqua Park enamaslayidi angu-20 MAHHALA.
IFULETHI LAKHO LENKATHI YONYAKA LIKULINDILE endaweni YEHHOTELA engu-5* e-GOLDCITY. QASHA IFULETHI LAKHO e-US futhi UBE NEHOLIDE ELIHLE KAKHULU.
Itholakala endaweni enhle kakhulu nehloniphekile yase-Alanya, amafulethi ethu aqukethe izindlu ezinokubukwa kolwandle kanye nokubukeka kwesigodlo sase-Alanya. Le phrojekthi isengxenyeni esenyakatho ye-Alanya phansi kwezintaba zase-Goldcity, enye yezindawo ezinkulu kunazo zonke e-Alanya. Uma uqasha enye yama-villa namafulethi e-Goldcity, uzozuza kuwo wonke amasevisi alandelayo mahhala.
Isikhungo se-Alanya, itheku kanye nebhishi kungafinyelelwa emizuzwini engu-10 nje ngemoto futhi kungenzeka ukusebenzisa izithuthi zomphakathi. Kunendawo yokuthenga ngaphakathi kwendawo yezidingo zansuku zonke. Kunamathuba okuya esikhungweni se-Alanya nezinye izindawo ezinamasevisi ethu ngezikhathi ezithile zosuku. Isikhumulo sezindiza esiseduze yi-Gazipasa Airport futhi into yokuhamba eya esikhumulweni sezindiza inikezwa emizuzwini engu-30.
* Imali kagesi namanzi okufanele isetshenziswe ikhokhiswa isivakashi lapho siphuma.
* * Isivakashi kufanele sikhokhe imali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo lapho singena.
I-SPA (ukubhucungwa komzimba nokunye ukunakekelwa akufakiwe)
Iklabhu Yezingane (iminyaka engu-4-12)
Imisebenzi Yosuku & Ubusuku & Imibukiso
Ama-sun lounger amahhala, ama-umbrellas ebhishi nasechibini lokubhukuda
Ukusakaza nge-satellite emakhaya
Ukusetshenziswa kwe-trampoline nezinkundla zokudlala
I-wifi yefoni yangaphakathi
I-tennis yetafula emakhaya
Indawo yezemidlalo ye-chess Goldcity (111 714 m2)
Izinkundla zebhola lezinyawo zobuchwepheshe I-Tennis,
ze-basketball Indawo yepikiniki
Indawo yokubhukuda yobukhulu
bama-Olympic Indawo yokubhukuda yangaphandle
Izindawo zokubhukuda zezingane
Amagumbi engqungquthela ase-Amphitheatre ebhishi yangasese
Indawo yokudlela ye-Buffet ( Ekhokhelwayo)
Izindawo zokudlela zenqola (Ekhokhelwayo)
i-Zodiak bar (isitezi se-16,
ikhokhiwe) Ibha yokwamukela izivakashi (amahora angu-24) (ikhokhiwe)
wezitolo zezitolo Izikhungo zokuzivocavoca zobuchwepheshe Isikhungo sokuzijabulisa (i-bowling,
i-billiards, i-air-hockey, ibhola letafula, i-tennis yetafula, i-cafe ye-inthanethi) (Kukhokhelwe)
Isaluni yoBuhle yesevisi ye-Mini-golf Doctor
Imoto, ukuqasha ibhayisikili/ukudluliselwa I-Heliport Alanya shuttle Isithuthi samahhala ukuya ebhishi
Isithuthi samahhala ngaphakathi
Indawo yokwamukela (amahora angu-24)
(amahora angu-24) Ukwamukelwa okuhlukile kwababungazi
yokunakekela indlu Izindawo zokupaka izimoto
Qala ukuhlela iholide elimnandi...